I-modhi - Geofumadas
Vokupedzisira ve “Mwaka mune Zvivakwa” mubairo
Bentley Systems yakazivisa mapurojekiti ekupedzisira ekupa mubairo weakanakisa mitsva mukushandisa kwesoftware mhinduro mukutungamira kwezvivakwa. Kune makumi mashanu nenomwe ekupedzisira, anouya kubva kumazana mana nemakumi mana akasarudzwa pasirese pachiitiko ichi cha 57. Idzo nhamba dzinotonhora asi dzinoratidza kuti nei gore rapfuura raive muSingapore, dzimbahwe ...
Isa Mepu yeBing semepu yekurongwa mu Microstation
Microstation mune yayo CONNECT Edhisheni, mune yayo yekuvandudza 7 yakagonesa mukana wekushandisa Bing Mepu seye mufananidzo webasa. Kunyangwe zvaigoneka zvisati zvaitika, zvakatora kiyi yekuvandudza yeMicrosoft Bing; asi sezvaungangorangarira, Microsoft ikozvino mubati mukuru waBentley muPavilion Alliance…
Land yokunyoresa mu akapoteredza National Transactional System
Zuva rega rega nyika dzinotarisa e-hurumende mafambiro, uko maitiro akareruka mukutsvaga kwekupa basa riri nani kuvagari, pamwe nekudzora miganhu yehuori kana husina basa. Isu tinoziva kuti mutemo, masangano uye maitiro maererano nezve chivakwa munyika yega yega ...
Cadastral gwaro kubva zvoga CAD / GIS
Kuburitsa chitupa cheimba panguva yakakwana kwakakosha kuti kupihwe masevhisi munzvimbo dzeCadastre, inogona kugadziriswa pasina kuyedza kukuru, kuve nechokwadi chekuita uye kudzikiswa kwezvikanganiso zvevanhu. Mumafashoni ekare, patakashanda nemadhorobha, kana mushandisi akakumbira ongororo uye chitupa checadastral, hafu yebasa racho yaive ...
Bentley Systems Cadastre Ini-muenzaniso QGIS
Bentley: Mobile mafomu uye vanoshandisa-kwete DGN-
Iko kuenderera kwekumira uko makambani ari kupa maturusi eGeo-engineering ave nawo mune kwavo kugona uye kuchinjika kune zvigadzirwa zvehunyanzvi. Position yacho inoratidzirwa kwazvo, munzira iyo mukutaurirana kwavo kwekambani vanotengesa hunyanzvi hwavo, kunyangwe zuva rega rega gaka riri pakati pechirango rinova rakaoma ku ...
Android Bentley Systems DGN Ini-muenzaniso ipad
Kunzwisisa pfungwa yeBIM, munyaya yeBentley Systems
Mumashoko akareruka, BIM (Kuvaka Ruzivo Modeling) ndiko kushanduka kwechimiro chetsika chinonzi CAD (Computer Inobatsira Dhizaini) uye kunyangwe paine mabhuku akazara akanyorwa pane izvi mushure mekunge Jerry Laiserin afambisa izwi, nekuda kwekudzidzisa isu tichaedza kuve nyore sezvinobvira: Asati, kana achigadzira chivakwa, mugadziri mushure mekubatana kwakanaka ...
AutoDesk Bentley Systems DGN Ini-muenzaniso
Humwe usiku muna mubayiro of Iva Rakafuridzirwa
Blogsy chishandiso chakanakisa, kusvika parizvino chakanakira kunyora kubva kuPadad. Sekuratidzira, ini ndinotarisira kumutsiridza ichi chinyorwa sekupihwa mibairo. Ndingadai ndaifarira kutevera vashanyi vanogara naWoopra, asi chinyorwa chake chakanyanya kurema zvekuti akakanda saiti iyi kakati, iyo ...
Bentley I-modhi, kudyidzana kuburikidza neODBC
I-modhi ndiyo pfungwa yaBentley yekukurudzira kuona kweiyo dgn mafaera, iine mukana wekuongorora, kubvunza uye kuratidza yakadzamidzirwa xml. Kunyangwe paine plugins yekudyidzana neAutoDesk Revit nePad, pamwe mashandiro akagadzirirwa pdf vaverengi uye Windows 7 yekuongorora inonyanya kuoneka mune izvi ...